AhluSuna (ASWJ) markay tabar haysey talo ma hayn, shacabka Puntland iyagu ma tashan doonaan intay tabar leeyihiin? – Radio Daljir
AhluSuna (ASWJ) markay tabar haysey talo ma hayn, shacabka Puntland iyagu ma tashan doonaan intay tabar leeyihiin?
Febraayo 29, 2020 8:00 g 1
Maanta waxaa soo gabagaboobey saamayntii siyaasiga ahayd ee wadaadada AlhuSuna Waljameeca (ASWJ) ku lahaayeen Galmudug, gaar ahaan Galgaduud oo inta badan mar ay keligood ka talin jireen.
Culimada AhluSuna oo gorgortan siyaasadeed iyo saamayn ballaaran lahaa waxay qayb ka ahaayeen maamulkii Galmudug ee Madaxweyne Xaaf mar uu hoggaankiisa kali ku ahaa, balse khilaaf soo kala dhexgalay Madaxweyne Xaaf iyo Villa Somalia ayaa sababay in wadaadii AhluSuna Waljameeca la saftaan Villa Somalia, islarkaana maalin cad bannaanka la dhigey Madaxweyne Xaaf oo markaas ahaa hoggaanka sharciga ah ee Galmudug.
Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo maalintaas talo siiyey AhluSuna Waljameeca ayaa u sheegay in hoggaanka Villa Somalia ay ayagana ASWJ marsiin doonaan halkii ay Xaaf mariyeen. Horaa loo yiri “nin kuu digey kuma dilin”
“Haddii madaxda AhluSuna dhabarka ka wareemaan Madaxweyne Xaaf waxaa shaki la’aan ah in maalin aan dheerayn iyaguna ka shalayn doonaan.”
Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo bartiisa facebook 21 June 2019 ka digay khataraha ASWJ ku soo fooleh
Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka digayey majaxaabinta madaxweyne Xaaf
Digniintii Cabdiraxmaan Cabdishakuur maanta ayay sida cadceeda u muuqatay kuwii taladiisa diideyna iyagoo shalaysan ayaa awood ciidan lagu muqiiniyey, waxaana ay maanta taaganyihiin “shalay oo aan tabar hayeyna talo ma ahayn, maantoo aan talo hayana tabar ma hayo.”
Haddaan Galmudug iyo tusaaleynteeda intaas uga nimaadno, waxaan shaki ku jirin meel walba oo nabad ah islamarkaasna uu ka jiro maamul ay bulshadu soo dooratay in Villa Somalia u aragto nabar ku taagan hoggaaminteeda, maxaa yeelay Villa Somalia ma ay oggola in gobol aan fulin danaheeda uu ka sii jiro geyiga Soomaaliyeed.
Waxaa maragmadoonto ah wixii laga maleegay Baydhabo iyo Dhuusamareeb haddana dabinkeeda Jubbaland laga maleegayo in ay Puntland maanta iyo shalayba ka socotay.
Qofna caad kama saara in Villa Somalia ay hadda sii xoojineyso qorshaheeda afgambi ee ka dhanka ah Puntland.
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdilaahi Deni oo shacabka Puntland arrintaas uga digaya dabayaaqadii bishii December 2019 ayaa ku boorriyey in shacabka Puntland ay adkaystaan midnimadooda, oo aysan marnaba oggolaan nidaam dowli ah oo lamid ah kii dalka burburiyey, kuna kooban koox gaar ah, sida shanta Golihii Sare ee Kacaanka.
“Wax kasta oo ka horimaanaya shuruucda dalka ma noqon doonaan wax ay Puntland aqbasho. Waxaa nasiibdarro ah dadkii burburka iyo dhibka keenay in wali ay mar labaad leeyihiin xeerarkii dalkaan dejinaynaa, nidaamka doorashada annagaa astaynayna; waxaan rajeynayaa dadka reer Puntland in ay indhaha furaan hadda meel loo cararana ma jirto, SSDF-na looma noqon karo ee difaaca hala adkaysto,” ayuu yiri Madaxweyne Deni.
Digniinta Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni
Qaababka Villa Somalia ay Puntland u wajahayso oo dhowr weji leh waxaan kaga bogan doonnaa warbixinno gaar ah, balse maanta waxaan ku soo gunaanadaynaa shacabka Puntland ee qaarkood lagu khaldayo waddaniyad aan jirin oo haddana QABIILEYSAN ma ku baraarugi doonaan digniinta Madaxweyne Deni ka digay dabinada reer Puntland loo maleegayo iyaga oo ka tusaale qaadanaya tan Galmudug maanta loo qooshay?
Siyaasadda & Dhaqaalaha 486 Wararka 22944
Shirwac 11 months ago
Waxaan idin kula talinayaa inaad midnimada dalkiina u tanaasushaan Deni iyo kuwa khilaafka gooni ugoosadka nagu wada waxaan soo dhawaynaynaa dadaalada dowladu ay wado somali somaali baa leh
U Jawaab Shirwac Buri halceliska